Ogaden News Agency (ONA) – Raila Odinga oo Markii Ugu Horaysay Taageerayaashii Lahadlay.
Raila Odinga oo Markii Ugu Horaysay Taageerayaashii Lahadlay.
Hogaamiyaha Isbaheysiga Mucaaridka Kenya ee NASA, Raila Odinga ayaa shalay Axadii markii ugu horeysay lagu arkay fagaraayashaa dadka isugu yimaado tan iyo jimcihii lasoo dhaafay oo ay Guddiga doorashada ku dhawaaqeen Guusha Uhuru Kenyatta.
Odinga ayaa boqolaal kamid ah taageerayaashiisa kula hadlay xaafada dadka saboolka ah ay degen yihiin ee Kibera magaalada Nairobi, isagoo u sheegay in Qorshahooda u dajisan ay ku dhawaaqi doonaan talaadada soo socota.
Raila Odinga ayaa kadib booqasho ugu tagay qoyska gabar 10 jir ah oo la sheegay inay ku dhimatay rabshadihii shalay dhacay. Beesha Caalamka ayaa cadaadis ku heysay hogaamiyaha Mucaaridka Kenya inuu aqbalo in doorashada looga guuleystay, waxaase la ogeyn waxa uu ku dhawaaqi doono talaadada soo socota.
Shalay Sabtidii ayay rabshado ka dhaceen goobaha ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Raila oo ay ku jiraan xaafada isku raranta ah ee Kibera iyo Mathare. Magaalada Kisumu oo ay mucaaridka ku xoogan yihiin ayaa kamid ahayd goobaha ay rabshadaha ka dhaceen.
Tirada dhimashada ayaa la sheegay inay gaareyso 11 qof, walow mucaaridka ay sheegeen in ciidamada amniga ay dileen in ka badan 100 qof. Hase yeeshee inta badan dalka Kenya ayaa degenaa oo ma aysan dhicin rabshadihii waaweynaa ee laga cabsi qabay.